Waan ku guuleysan doonnaa Wadajir! | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulWaan ku guuleysan doonnaa Wadajir!
22 / 03 / 2020 34 Istanbul, IETT, GUUD, WADADA, HAY'ADAHA, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
si wadajir ah ayaan u guuleysan doonnaa
Madaxweynaha Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul (IMM) Madaxweynaha Ekrem Imamoglu ayaa yidhi, “Waannu ku guuleysan doonnaa si wada jir ah.” Wuxuu ku casuumay dadka deggan Istanbul, gaar ahaan dadka waayeelka ah, inay guryahooda ku nagaadaan. Agaasinka Guud ee IETT wuxuu sidoo kale ku qoray ereyada madaxweynaha dulucda basaska: Waan ku guuleysan doonnaa Wadajir!
Ekrem İmamoğlu, Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Magaalada Istanbul (İBB), wuxuu u guuray dhismaha dhexe ee Sara inhane si uu u sii wado shaqadiisa ka dib dhacdada uu ku qabtay Üsküdar duhurkii. Ka dib markii uu la kulmay shaqaalihiisa, habka teleconference, İmamoğlu wuxuu yimid kaamirooyinka kahor. İmamoğlu wuxuu fariin muhiim ah siiyay dadka reer Istanbul markii ay baahintiisa toos uga maqnaayeen xisaabaadka warbaahinta bulshada iyo TV-ga İBB. "Maanta, waxaan aaday Üsküdar aniga oo aan ogaysiin qofna inuu arko maalgashi aad u muhiim ah oo "SKİ" ah oo ku saabsan Üsküdar goobta. Xitaa haddii jidadka ay ka aaminaad badnaayeen sidii hore, wali waxaa jiray dad tixgelin badan leh. Tani waa gabi ahaanba khalad. Ha yeelin tan. Fadhiiso balakoonkaaga. Fur daaqadahaaga, hawo hawo u dejiso. Midba midka kale waxaan gelineynaa khatar weyn markii aan baxno, gaar ahaan anaga oo isku urursan aagagga waaweyn. Gaar ahaan muwaaddiniinta kale ee jira 60 sano iyo wixii ka weyn; Waan ku baryayaaye, bal dhegta u dhig ereyaga.
"CARRUURTA, waxaan saadaaliyay inaad guriga ku caajiso"
"Sidoo kale carruurta qaaliga ah; Waxaan filayaa inaad guriga ku caajiso. Dabcan, waxaad xaq u leedahay inaad ciyaarto, laakiin yaanan iska iloobin casharradeenna. Aynu aqrino buugaag badan. Yaanan isku darsan awooweyaasheena iyo ayeeyadeen in muddo ah. Tani aad ayey muhiim ugu tahay adiga iyo caafimaadkoodaba. Waxaan rabnaa inaadan xanaaqin maanta. Waxaan dhahnay, 'Waan wada guuleysan doonnaa.' In si wada jir ah loogu guuleysto; waa inaan wada shaqeyno, waa inaan wada shaqeyno. Haa, Muwaadiniinta aan walaalaha nahay, ee da 'ahaan jiray muddo, ayaa caajis ku ah guriga. Laakiin waxa dhaca, yaynaan ku xanaaqin maalmahan, aynu qaadan taxaddar ugu badan. Hada fadlan guriga joog. Waan ku jeclahay dhamaantiin. Ilaahay ha ina wada barakeeyo. Waxaan dhunkanayaa gacmahaaga, odayaashayada. Salaan iyo kalgacayl dhamaantiin. Waxaan u malaynayaa in farriimadayda la gaadhay dhalinyarada. Guys, waxaan kaa dhunkanayaa dhamaan indhahaaga. Waxaan idiin rajeynayaa maalin caafimaad leh. Waan wada guuleysan doonnaa.
Agaasinka guud ee IETT, oo talaabo qaaday kadib farriinta madaxweynaha İBB Erkem İmamoğlu's “waan ku guuleysan doonnaa”, ayaa daabacay farriinta “Waan ku guuleysan doonnaa wadajirka!” Codsiga waxaa lagu balaarin doonaa Gawaarida Dadweynaha ee Gaarka ah waqti kadib.
Goobta ayaa la xiray iyada oo la socotay garaka taariikhiga ah
Basin iyo Ladik waa in lagu qiimeeyaa qorshaha Master Plan
Degmooyinka iyo degmooyinku waxay wadaagaan buundooyinka
Bosphorus oo la marinaysa Marmaray waxay ku dhici doontaa daqiiqado 2
Tareen ku socda Bergama oo la yimid Dekedda Waqooyiga Aegean
Khalic Metro Metro Construction wuxuu la shaqeeyaa UNESCO iyo saraakiisha ICOMOS
Dhamaadka 2013, khadka tareenka xawaaraha dheereeya ee Ankara-Istanbul waxaa la bilaabay Marmaray.
Ogeysiiska Qandaraaslaha: 10 unug oo Qalabka Golaha Wasiirada ah (oo leh Qalabka Lok
Ogeysiinta Ugaarsiga: 5 tareen xawaare aad u sarreeya leh oo leh boqolkiiba 1 kayd ah…
Wasiirka Binali Yıldırım: Tareenka Xawaaraha Sare ee Ankara-Istanbul ee 2013 si uu u furo Marmaray
Hindisaha Iran iyo Czech ayaa si wadajir ah ugu shaqeynaya TCDD
Nidaamka Sharaxaya Lacagta Xaashida ah ee ATM-ka lagu sameeyay